Grooveshark waa adeeg geeyo weyn music online kuu ogolaanaya in aad si aad u baadhid iyo muusig, sidoo kale si fudud loo abuuro playlists si ay u ururiyaan aad jeceshahay music Grooveshark lacag la'aan ah. Laakiin haddii aad rabto in aad kala soo bixi aad playlists Grooveshark sida MP3 files on your computer, waxaa laga yaabaa in wax yar ka adag.
Waxaan ahay taageere weyn Grooveshark music ah oo aan qabo hab fiican si loogu badalo Grooveshark in MP3.I isticmaalaan qalabka dilaaga qaar ka mid ah si ay u qoraan Grooveshark music geeyo, ka dibna u badbaadin qaab MP3. Waxa aan ku talinaynaa waa TunesGo iyo Streaming Audio Recorder . Waxay dagan u shaqeeyaan si fudud oo waxtar leh.
Marka aad ciyaara song Grooveshark hal mar, app this isla diiwaan galin kartaa lana badbaadin in MP3 on your computer, xawaare wanaagsan oo tayo leh oo maqal ah. Waxaad raaci kartaa tutorial ah oo faahfaahsan oo ku dhammayn Grooveshark in mp3 diinta.
Xalka 1.TunesGo ---- Beddelaan Grooveshark in MP3 free
Sida loo Download iyo Beddelaan Grooveshark in MP3 lacag la'aan ah?
Waxaad gudbin karaan tutorial this: Sida loo iyo Beddelaan Grooveshark in MP3 free via TunesGo
Tallaabo 1: Ku rakib iyo abuurtaan Streaming Audio Recorder
Streaming Audio Recorder Waxaa laga heli karaa halkan marka gujinaya download ka link hoos ku qoran. Ka dib markii in, double guji faylka .exe si loo soo dajiyo this smart app. Markaas, waxa maamula.
Tallaabo 2: Ku bilow si ay u qoraan Grooveshark in MP3
On interface ugu weyn ee Streaming Audio Recorder tan, waxaad u baahan tahay in la garaaco "Record" badhanka si ay u qoraan Grooveshark in MP3. Markaas, aad u ogaato ugana ciyaari song Grooveshark aad rabto si ay u qoraan.
Ma waxaad arki taariikhqorihii audio smart uu bilaabayo inuu u qoraan song Grooveshark hadda,? Muddo ka dib, aad doonaa duubo la dhammeeyo sida ugu dhakhsaha badan song ay ka badan tahay. Dabcan, waxa kale oo aad joojin kartaa duubay gacanta ay mar kale la garaaco ee "Diiwaanka" button.
Fiiro gaar ah: shaqo kale oo soo jiidasho ah app tani waa ay kuu sameeyaan markii bilaabi-duubo iyo dhamaadka duubo ee app this. Waa mid aad u qabow aad aadan agagaarka intii lagu qoro.
Waxaad xaqiiqo ka eegi kartaa tutorial video hoose si ay u bartaan si ay u isticmaalaan barnaamijkan si deg deg ah.
Waxaa la samayn. Waxaad aadi kartaa maktabadda this app ee si aad u ogaato wadada duubay. Track ayaa durbaba waxaa file MP3 ah. Uma baahnid in la helo qalab kale diinta. Si aad u furato folder meesha file MP3 waxaa loo kaydiyaa on your computer, kaliya aad xaq u guji dooro "Open ee Folder".
Sida loo Download Deezer playlist
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Grooveshark in MP3